I-China Hot Sale Steam Amanzi Ashisayo Retort Sterilizer Intengo ye-Autoclave Ye-Canning Food Manufacture and Factory |Shenlong
I-Retort iyisisetshenziswa esisetshenziselwa ukuvala inzalo ukudla okusemathinini okune-asidi ephansi, izinga lokushisa lingaphezu kuka-100℃ futhi impilo yeshalofu ingaphezu kwezinyanga eziyi-6.izinga lokushisa lokuphindisela kanye nesikhathi kusethwe ngokomkhiqizo wakho.
1.Impahla yethu yokubuyisela emuva: sebenzisa i-SS304 noma i-316, ama-flange ama-retort namakhanda esiwasebenzisile yikhwalithi ephakeme kakhulu e-China.
2.Isistimu yokulawula:Isistimu yokulawula ye-SIEMENS iqinisekisa ukuthi amakhasimende angathola ngesikhathi esifanele i-supply chain emhlabeni ukuze anciphise isikhathi sokuphumula.
3.Ukuphindisela ukuvikela ukuphepha: uma umnyango we-retort ungavaliwe, ngeke uqale inqubo;umnyango awukwazi ukuvulwa uma kukhona ingcindezi retort kwangaphakathi;ifakwe i-valve yokuphepha ukugwema ukucindezela kwe-ultrahigh retort.
4. Amathuluzi ethu asebenza ngokuzinzile ukuze agweme umsindo omkhulu
I-water spray retort iwukufafaza amanzi emkhiqizweni, ngokuvamile, isifutho samanzi sifakwe isishintshi sokushisa ukuze sihlukanise amanzi angaphakathi esitimu namanzi apholisayo, ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo awungcoliswa.
Uma kuqhathaniswa ne-retort evamile, i-water spray retort isebenzisa amanzi amancane nesitimu, ingonga amandla.
1. Izinga eliphakeme lokuzenzakalelayo.Ibhodwe lokuvala inzalo lithatha amavalvu womoya angu-15, futhi izinqubo zokwengeza amanzi, ukugcwalisa amanzi, ukufudumeza, ukugcina ukufudumala, ukupholisa, ukulawula ukucindezela, kanye nokukhipha konke kulawulwa ngokuzenzakalelayo.Inomsebenzi wokuxilongwa kwephutha futhi ingasetha amafomula enqubo, ukushisisa kwezigaba ezintathu, ukupholisa okuthambile, njll.
2. Ukuvala inzalo emanzini ahlanziwe kusebenzisa ukuqoqwa kwamanzi afingqiwe kanye nobuchwepheshe bokuvala inzalo, ngeke kube nokukalwa ebhodweni, futhi ingaphezulu lephakeji lihlanzekile, ngakho-ke izindleko zokuthenga izinto zokuhlanza amanzi ezithambile zingasindiswa.
3. Ukushisa okungaqondile nokupholisa, akukho ukungcoliswa kwesibili, amanzi ajikelezayo ashiswa ngokungaqondile noma apholiswe ngesishintshi sokushisa, akukho ukungcoliswa kwesibili, okufanelekile ikakhulukazi ukupholisa amanzi olwandle.
4. Ifanele izinto ezihlukahlukene zokupakisha.Njengoba amanzi abandayo engathelwanga ngokuqondile ebhodweni phakathi nenqubo yokupholisa, izinga lokupholisa elithambile lingamukelwa ukupakishwa kwamabhodlela engilazi antekenteke ukuze kugwenywe ukuphuka kwamabhodlela okubangelwa umehluko omkhulu wokushisa.Lesi sici futhi sifanele i-shellfish, njenge-clams.Uma umehluko wezinga lokushisa mkhulu kakhulu, noma umehluko wezinga lokushisa mkhulu kakhulu, igobolondo lizophuka
5. Ukulawula ukucindezela okuphelele, uhlelo lwebhalansi yokucindezela inzalo olufanele ukupakishwa okuqukethe igesi lubalulekile ekuvaleni inzalo kokupakishwa okunegesi, ikakhulukazi esigabeni sokupholisa, esidinga ukulawula ingcindezi.Isistimu yokulawula ingaqapha ngokuqhubekayo izinga lokushisa nokucindezela ethangini lokucubungula, futhi ilungise ukucindezela ethangini ukuze yenze ihambisane nokucindezela kuphakheji.Amaphakheji agcwaliswe ngomoya noma igesi nganoma yimaphi amaphesenti, noma amaphakheji avalwe ngaphansi kwe-vacuum angenziwa inzalo ngaphandle kokudala umonakalo noma ukuguqulwa kwephakeji noma okuqukethwe kwalo.
6. Ifakwe izinto ezine zokuvikela ukuphepha.Ivalvu yokuphepha, i-proximity switch, isilinda, ukukhiya okwenziwa ngesandla.
7. Uhlelo oluphelele lokubika.Lesi sisetshenziswa sinombiko wephutha, umbiko ophelele wokuvala inzalo, umbiko wokuphepha*, njll.
8. Umsebenzi wokuhlola inani lika-F ongenantambo.Ukusabalalisa ukushisa namandla okubulala inzalo kungalinganiswa.9. Izingxenye zokulawula eziyinhloko zebhodwe lokuvala inzalo zonke zingenisiwe, izinga lokuhluleka liphansi kakhulu, futhi ukwethembeka kuphezulu.Kufanele futhi uqaphele lapho ukhetha izikhwama zokupheka ezisezingeni eliphezulu.
samukela ubuchwepheshe bokushisela obusezingeni eliphezulu, siqinisekisa ukuvalwa komshini wethu
Igama: Thinta i-Sreen
Igama Brand: SIEMENS
Sisebenzise isikrini sokuthinta se-Siemens esingenisiwe namamojula, hhayi isikrini sokuthinta se-Siemens sasekhaya namamojula
Igama: Idivayisi yokulwa nokudlidliza
Igama Brand: Shenlong
Umshini wethu ufakwe idivayisi ye-Anti-vibration ukuvikela iphampu.
Iphakheji yethu yokulethwa ifanele ukuthunyelwa phesheya kwezilwandle, umshini wethu ugxilile ezitsheni futhi izingxenye zigcwele ecaleni lezinkuni.
Okwedlule: Umshini Wokubuyisela Ovundlile Onenqubo Yokugeleza Amanzi Yesikhwama Sokubuyisela
Olandelayo: Ukulethwa Okusha kwe-China Multifunction Food Processing Machine Retort Pouch Sterilizer Autoclave
Ukubuyisela Amanzi Agcwele Okuzenzakalelayo
I-Automatic Water Rotary Retort ngokugcwele
I-Horizontal Water Spray Retort Autoclave
I-Semi-Automatic All-Water Rotary Retort
I-Water Bath Sterilizer Retort
I-Water Spray Rotary Pilot Retort Yelebhu